Akhriso Shabaabul Mujaahidiin Oo Fulisay 418 Weerar Muddo Lix Bilood Ah – Calamada.com
Akhriso Shabaabul Mujaahidiin Oo Fulisay 418 Weerar Muddo Lix Bilood Ah
calamada September 6, 2018 3 min read
Shabakad lagu magacaabo LONG WAR JOURNAL oo ka faaloota arimaha dagaalada, fadhigeeduna yahay dalka Mareykanka ayaa daraasad kooban ka sameysay weerarada ay fulisay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab muddo lix bilood gudahood ah oo ka bilaabaneysa October 2017 ilaa April 2018, Iyadoona sheegtay in mudadaas ay Xarakadu qaaday 418 howlgal oo kala duwan kuwaas oo beegsaday xukuumada ridada ee taagta daran iyo ciidamada Kuffaarta Afrikaanta ee ku sugan wadanka.
Warbixintu waxay sheegtay in 75% boqolkiiba ay weeraradan ka dhaceen magaalooyinka dhaca koonfurta Soomaaliya, haba ugu bad-naato Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran oo ay warbixintu sheegtay in ay martigeliyeen 30% boqolkiiba howlgalada ay fuliyeen Mujaahidiinta.
Howlgaladan ayaa isugu jira dagaallo toos ah, qaraxyo, Iqtiyaalaat iyo camaliyaat istish-haadi ah sida warbixinta lagu sheegay, waxana ugu badnaa weerarada toos ah ee lagu qaadayo saldhigyada murtadiinta iyo kuwa ciidamada Kuffaarta Afrikaanta.
Bartilmaameedka ugu horeeya howlgaladan ayaa ahaa maleeshiyaatka kooxda ridada kuwaas oo nasiib u yeeshay 54% boqolkiiba howlgalada Mujaahidiinta oo ka dhigan 224 weerar, halka ciidamada Kuffaarta Afrikaanta ay la kulmeen boqolkiiba 28, taas oo iyadana ka dhigan 117 weerar.
Daraasadu waxay sheegtay in bartilmaameedyada kale ee lagu beegsaday howlgaladan ay isugu jiraan saraakiisha iyo shaqaalaha hay’adaha sirdoonka ee kooxda ridada iyo roondooyinka kolonyooyinka ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ee wada socda.
125 ka mid ah howlgaladan waxay warbixintu sheegtay in ay ka dhaceen magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda halkaas oo ah goobta uu ka socda hardan ugu adag ee u dhexeeya Mujaahidiinta iyo cadowga Allaah. Waxay warbixintu sidoo kale sheegtay in sanadkan ay aad u korotay tirada howlgalada Mujaahidiinta Buuraha Goolis, kuwaas oo fuliyey ugu yaraan 23 howlgal mudadaas lixda bilood ah, iyadoona tilmaantay in weeraradaas ay intooda badan ka dhaceen magaalada Boosaaso iyo deegaanada ku xeeran.
Mar ay daraasadu milicsatay howlgalada guutada Istish-haadiyiinta ayey sheegtay in mudaddaas lixda bilood ah ay guutadu fulisay 10 duullaan oo isugu jira camaliyaat Istish-haadi ah kuwa Inqimaasi ah, waxayna beegsadeen bey tiri xarumaha xukuumada ridada iyo saldhigyada ciidamada Kuffaarta Afrikaanta.
Warbixintu waxay sheegtay in Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay hardan adag kaga jirto Soomaaliya tan iyo markii laga qabsaday magaalooyinkii waaweynaa ee ay joogtay dalka sanadkii 2011-kii balse waxay sheegtay in wado dagaallo ku dhufoo ka dhaqaaq ah oo naafeeyey ciidamada saliibiyiinta iyo xulifadooda murtadiinta, islamarkaana u suurageliyey in ay si tartiib-tartiib ah ku soo ceshato magaalooyin iyo deegaano horay looga qabsaday oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
“Xarakada Al-Shabaab waxay halis ku tahay saldhigyada ciidamada midowga Africa, iyo kuwa ciidamada Soomaaliya, waxayna sidoo kalena awood u leedahay in ay weerarto goobaha aadka loo ilaaliyo eek u yaalla magaalada caasimada ah ee Muqdisho” ayey tiri warbixinta.
Mar ay soo hadal qaaday Jabhadda ka howlgasha gudaha Kenya ayey warbixintu sheegtay in geesiyada ka howlgala dhulkaas ay qaadeen ku dhawaad 20 weerar intii lagu gudajiray mudadaas lixda bilood ah, kuwaas oo ka kala dhacay gobolada Lamu, Garissa, Mandhera, Wajeer iyo Tana Riiva, kuwaas oo badankood lala eegtay ciidamada military-ga iyo kuwa police-ka.
“Kooxdan oo ah farac ka tirsan ururweynaha Al-Qaacida ayaa sidoo kale halis amaan xoogan ku haya waqooyiga Kenya, halkaas oo ay ka fuliyeen weeraro dhowr ah oo isugu jira dagaallo toos ah iyo qaraxyo miinooyin ah, waxaana xusid mudan in sanadkii la soo dhaafay ay aad u kordhiyeen tirada iyo tayada howlgaladooda” ayaa lagu yiri warbixinta.
Daraasadan ayaa gebagebadii lagu sheegay in Mareykanka uu ugaarsi iyo beegsan ba’an ku hayey Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab tan iyo 2006-dii, xilligaas oo ay weeraradooda ku bilaabeen taageeradii ay siinayeen duullaankii xabashida, iyadoona dishay hogaamiyeyaal dhowr ah oo ka tirsan Mujaahidiinta, sidoo kale taliska ciidamada Mareykanka ee Africa ayaa sanadkii 2017-kii kordhiyey weerarada xagga cirka ee ay ka fulinayaan Soomaaliya ka dib markii Mareykanka uu sheegtay in Xarakadu ay weli tahdiid ku tahay danahooda iyo danaha xulifadooda.
Laakiin iyadoo ay sidaas tahay, hadana waxay warbixintu sheegtay ololaha dagaal ee Mareykanka iyo duqeymaha uu ku hayo Mujaahidiinta aysan yeelan saameyn waxtarleh oo yareyn karta dhaq-dhaqaaqa iyo howlgalada Mujaahidiinta, welina ay Xarakada gacanta ku heyso magaalooyin iyo deegaano ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya kuwaas oo duullaanada military ee kuffaarta Afrikaanta iyo duqeymaha Mareykanku intuba ay suuragelin waayeen in la qabsado.
Previous: Shabaabul Mujaahidiin Oo Sheegtay Mas’uuliyadda Sarkaal Muqdisho Lagu Dilay.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo.26-12-1439 Hijri.